Lalao madio no andrasana
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 mai 2011 29 mai 2011 Catégories Politique
8 réflexions sur « KABARIN-DRAMATOA LALAO RAVALOMANANA »
Dia faly miarahaba anareo RENY LEGALISTA rehetra, tratry ny Fetin’ny Reny indray ê ! Ny faniriana, dia mba any an-tanindrazana amin’izay ianao Ramatoa Lalao Ravalomanana, no mankalaza an’io fety io, amin’ny manaraka !
29 mai 2011 à 9 h 22 min
Ny tenanay koa dia faly miarahaba ny reny eran-tany indrindra fa ireo reny malagasy mitaky ny ara-dalàna anisan’izany ianao Ramatoa Lalao Ravalomanana.Ho tahian’Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao.
29 mai 2011 à 13 h 12 min
Faly miarahaba anao ihany koa, ary misaotra indrindra tompoko amin’ny tso-drano!
Efa tanteraka ireo zavatra voambaranao ireo,
Na dia somary tara kely aza, aleo hono tara toy izay tsymisy mihitsy, ka dia miaraka amin’ny Legalista rehetra namana ny tenako , manomboka amin’ny
Faly miarahaba anao tokoa ny tenanay, Rtoa Lalao RAVALOMANANA, izay tena Renin’ny Malagasy rehetra!.. Tsy manana Reny lehibe toa anao izahay, ka mahatsiaro ho kamboty tokoa rehefa tsy eo ianao!
Miarahaba anao Mme LAlao
Précédent Article précédent : Madagascar n’a nul besoin d’aide étrangère selon Rajoelina
Suivant Article suivant : Rodoben’ny vehivavy tetsy Ambatomena !26 mai 11